WARBIXIN: Kor U Kaca Ku Dhacay Qiimayaasha Goolhayayaasha U Ciyaara Kooxaha Ugu Waaweyn Yurub – Kooxda.com
Home 2018 January France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Kor U Kaca Ku Dhacay Qiimayaasha Goolhayayaasha U Ciyaara Kooxaha Ugu Waaweyn Yurub
WARBIXIN: Kor U Kaca Ku Dhacay Qiimayaasha Goolhayayaasha U Ciyaara Kooxaha Ugu Waaweyn Yurub
Qiimaha xiddigaha ee suuqa kala iibsiga ayaa si weyn kor ugu kacay sanadihii ugu dambeeyay si kasta ha ahaatee goolhayayaasha ayaa wali la heli kaeaa kuwaas oo u ciyaaraha kooxaha ugu fiican yurub waliba qiimo waali ah lagu iibsan karo.
Xiddigii ugu dambeeyay ayaa laga bixiyay 160 milyan oo euro waxana ay Barcelona ku heshay Philippe Coutinho iyada oo 120 milyan gacanta ka saartay Liverpool 40 milyan guno ku bixin doonta.
Goolhayayaasha Manuel Neuer Iyo Ederson ayaa ah goolhayayaasha ugu qaalisan marka laga hadlayo suuqa kal iibsiga Bayern Munich ayaa Neuer ka bixisay 30 milyan oo euor halka ay kooxda Man city Ederson ka bixisay lacag dhan 40 milyan oo euro isaga oo ah goolhayaha ugu qaalisan.
Hadaba waxa aanu halkan ku eegi doonaa kor u kaca ku dhacay qiimayaasha goolhayayaasha lagu soo iibsaday.
Marc-Andre Ter Stegen oo ay kooxda Barcelona ku soo iibsatay 12 milyan oo euro ayaa soo bandhigay qaab fiican waxana uu haatan qiimihiisu kor ugu kacay lacag dhan 40 milyan oo euro.
Keylor Navas ayay kooxda Los Blancos ku soo iibsatay lacag dhan 10 milyan oo euro waxana haatan lagu qiimeeyaa lacag dhan 18 milyan oo euro.
Jan Oblak ayaa kooxda Atletico Madrid ugu soo biiray 16 milyan oo euro isaga oo noqday goolhayaha ugu qaalisan horyaalka La Liga waxana haatan lagu qiimeeyaa lacag dhan 50 milyan oo euro.
Ugu yaraan qiimo la mid ah midka Oblak aay kooxda doonaysa ka bixinaysaa goolhayaha kooxda Man United ee David De Gea kaas oo 25 milyan ugu biiray Red Devisl.
Goolhaya kooxda Chelsea ee Thibaut Courtois ayaa kooxda chelsea kaliya ugu soo biiray lacag dhan 9 milyan oo euro waxana haatan lagu qiimeeyaa lacag dhan 50 milyan oo euro.
Simon Mignolet oo kooxda Liverpool ugu biiray lacag dhan 10 milyan oo euro ayaa haatan lagu qiimeeyaa lacag dan 12 milyan.
Hugo Lloris ayaa lagu qiimeeyaa laba jibaarka 12 milyan oo ay kooxda Tottenham ka soo bixisay halka Goolhayaha kooxda PSG ee Areola lagu qiimeeyo 20 milyan oo euro.